SIDA LOO DHIGO TOONTA GURIGA EE GURI DABAQ AH XILLIGA QABOOBAHA: QABOOJIYAHA, DHALOOYINKA, MILIXDA, DIIRAY AMA DHULKA? - WIXII MARTIDA
Garlic waa dheecaan aad u fiican ee suxuunta aad jeceshahay. Waxay ku siinaysaa dhadhanka basbaaska iyo kiriimka cuntada..
Waxaa loo adeegsadaa karinta iyo daawada dhaqameed, waxaa loo baahan yahay jikada oo waa fiicantahay tufaaxa tayo fiican.
Waxaa lagu kaydiyaa wakhti dheer oo aan ka sii darin, laakiin kaliya xaaladaha oo dhan. Maqaalkani waxa aanu ka hadli doonaa sida loo kaydiyo toonta guriga ee guri dabaq ah?
Sidee loo diyaariyaa toonta kaydka muddada dheer? Diyaarinta waxay ka bilaabataa xilliga beergooyska.
Garlic waa 2 nooc, waqtiga iyo dabeecadaha ururinta waxay ku xiran yihiin iyaga:
Spring - noocyo kala duwan, oo sidoo kale loo yaqaanno toon xagaaga. La nadiifiyay marka caleemaha ay noqdaan hurdi waxayna bilaabeen inay hoos u degaan kuna seexdaan dhulka. Waqtiga xilliga bilowga ah ee bilawga-badhtamihii-badhtamaha;
jiilaalka ama jiilaalka - ururiyay dhammaadkii Luulyo. Waa suurtogal in la go'aamiyo diyaargarowga dhowr calaamadood: jaalaha ah caleemaha, khafiifinta miisaanka, dildilaaca maqaarka inflorescences.
Marka qashin lagu daro, waxaa muhiim ah in aan waxyeeleynin., maadaama ay madaxa waxyeelladu aanay ku habooneyn kaydinta muddada dheer. Way ka fiican tahay in la saaro majarafad Markaasna toonta waa in si fiican loo qalajiyo qorraxda furan ama hoosteeda.
Iyada oo ku xiran habka loo doortay si ay u gooyaan afkoda (marka laga reebo kaydinta ee xidhmooyinka). Ammaanka Toonta waxay ku xiran tahay nabadgelyadiisa muddo dheer.
Ma bixi karo:
ay saameeyeen kallana ama cuduro kale;
xoqan, dhaawacmay, maqaarka.
Ka dib dhammaan hababka diyaarinta ah waa la dhammeeyaa, waa waqtigii loo guuri lahaa si loo doorto habka kaydinta.
Ha ku niyad jabin haddii qaar ka mid ah toonta aysan ku habboonayn kaydinta muddada dheer, xaalad aan loo baahnayn waa la qalajin karaa loona isticmaali karaa iyadoo loo adeegsanayo qaabkan, laakiin waad xakameyn kartaa waa hab kale oo waqti dheer ah oo lagu keydiyo oo aan la dayacin.
Hooyo kasta waa ogyahay inaad si fiican u qaboojin karto cuntooyinka sida zucchini, bocorka, basbaaska alxanka, dabacasaha iyo basasha, oo aan wax yar u dhigin toonta.
Waxaad baran kartaa sida loo qodo oo loo diyaariyo toonta kaydka fiidiyowga:
Sidee loo dhigaa toonta guriga xilliga jiilaalka?
Doorashada goobta iyo baakadka
Garlic waa heysta rikoodhka dhirta beerta ee hababka kaydinta muddada dheer.
Maxay tahay iyo sida aan loo dhigin oo kaliya: iyo bacaha, iyo bangiyada, iwm. Isla mar ahaantaana wuxuu awoodaa inuu jiifiyo jiilaalka iyo xitaa ilaa goosashada cusub. Garlic wuxuu socon doonaa ilaa guga, labadaba diirimaadka iyo qabowga. Nolosha siyaabo kala duwan ayaa waxoogaa u kala duwan.
Sida loo dhigo toonta guriga? Halkee ku kaydi toonta xilliga jiilaalka? Garlic waxaa lagu kaydin karaa meelo dhowr ah.:
qol kasta oo qalalan;
on the loggia insole ama balakoonka.
Jidka, qaboojiyaha, gaar ahaan haddii aad haysatid in ka badan hal qaboojiye, tusaale ahaan, qaboojiyaha iyo qaboojiyaha waxaad ku guulaysan kartaa bocor, broccoli ama tayo.
Sidee loo xafidaa toonta guryaha magaalada? Meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo toonta dabaqa qaboobaha xilliga qaboobaha waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay dhulka hoostiisa, sidaas darteed haddii guriga uu yahay mid gaar loo leeyahay, waxay u badan tahay inuu jiro meel sidaas oo kale ah.
Garlic waxaa lagu keydiyaa qaboojiyaha si fiican, laakiin wuxuu ku qaataa meel bannaan. Tani mar kasta ma aha mid habboon, laakiin haddii aysan jirin wax kale oo la dooranayo, qaboojiyaha waa badbaado.
On sida loo diyaariyo kaydinta ee qaboojiyaha qadhaadh casaanka ah iyo basbaas Bulgarian, arki qalabka shakhsiga ee our site.
Garlic waxaa lagu kaydiyaa sanduuqyada, naqshadeynta, shaashadda heerkulka qolka meel kasta oo qalalan.. Loggia waxay sidoo kale ku haboon tahay kaydka toonta ah ee dhalooyinka saddex-litir ama sanduuqyada, haddii uu yahay glazed iyo insulin.
Doorashooyinka caadiga ah ee weelasha, weelasha loogu talagalay ilaalinta toonta guriga:
SanduuqyadaToonta aan la tirtirin, waxaa la geliyaa dhammaan madaxyada sanduuqyada ku habboon. Iyadoo ay ku xiran tahay doorbididda martigeliyaha burka ama milix.
Sanduuqyada waa ka fiican in ay isticmaalaan kontoroolka, waa inay leeyihiin meelo ama godad loogu talagalay marinka hawada. Sanduuqyada waxaa lagu talinayaa in la xareeyo oo lagu duubo basasha.
CuntooyinkaMid ka mid ah siyaabaha fudud ee loo ilaaliyo toonta xilliga jiilaalka. Madaxda toonta ee lagu meeleeyo dambiilaha oo lagu kaydiyaa guriga. Dharista dambiilaha waxay abuureysaa suurtogalnimo joogto ah oo wareega hawada.
Dambaaladu waxay dareemi doonaan wax fiican xaaladaha guriga iyo tufaax cusub.
Nylon Pantyhose ama shinbirahaHabka "Grandma" ee habka loo kaydiyo toonta guriga xilliga qaboobaha. Waxaa loo isticmaalay wakhti dheer, laakiin wali waa mid khuseysa.
Boogaha yaryar ee u dhexeeya dufka cirridka ayaa u ogolaanaya hawada, taas oo siineysa toonta fursad ay ku noolaadaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Qoob-ka-dhejisyada ayaa ku dhegsan rooga. Tani waxay u kaydisaa meel dabaq ah, iyo toonta waxaa la keydiyaa waqti dheer. Baakadaha waxaa badanaa lagu kaydiyaa sheyga.
BangiyadaSidee loo kaydiyaa toonta guriga xilliga qaboobaha bangiyada? In saddex-litir ee dhalooyinka ku duubnaa sida toonta cayriin iyo diiray. Isaga waxaa loo hayaa qaab isku mid ah, cusbo, saliid.
Bangiyada waxay ku sameeyaan qaboojiyaha ama balakoonka. Iyada oo ay ku xiran tahay mowduucyada, sii fur ama xir daboolka caagga ah. Baananka, dogrose ayaa sidoo kale lagu kaydiyaa kaydinta jiilaalka.
Xirfadaha.Qaar baa jecel inay ka baxaan toonta iyada oo aan la xirin. Ka bax - ku keydinta qafiska. Cawska dhoobada waxaa lagu dhexjiraa xadhig ama labeen.
Baqashadani ma noqon karto oo kaliya habka lagu ilaalin karo toonta, laakiin sidoo kale ku darida dheeriga ah ee gudaha. By habka, hubaal qof kasta ayaa arkay ugu yaraan hal mar nolosha iyo basasha basasha, waxay u weel u qalajinta habboon ee khudradda.
Garlic waa in si fiican loo qalajiyaa habka kaydinta.. Goobta kaydinta waa inay ahaato mid engegan, haddii kale qoyaanku wuxuu dhaawici karaa toonta oo dhan.
Fasalka Heerka sare ee dufcadaha tolmada ama foornooyinka lagu sawiray fiidiyowgaan:
Xaqiiqda ah in toontu waa xawaare fiican oo loo yaqaan 'dhammaan'. Ma ogtahay in loo isticmaalo ujeedooyin kale?
Akhri faahfaahin ku saabsan sida looga takhaluso caarada caarada ubaxyada gudaha ee toonta.
Garlic waa warshad gaar ah, oo aan qabin xaaladaha kaydinta. Waxaa si fiican loo ilaalin karaa dhammaan jiilaalka, labadaba kulaylka iyo qabowga.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira xaddidaad:
marka lagu kaydiyo kuleylka, heerkulka habboon wuxuu ka socdaa +15 ilaa +20 ° C;
qabow qaboojintu waa suurtogalnimo heerkulku ka yimid +2 ilaa +4 ° S.
Waa inaanay aad u qallalin goobta kaydinta, sida tufaaxa qalajin kara. Qoyaan badani waa mid aan la aqbali karin, maadaama uu toonku bilaabi doono kalluunka.
Si kastaba ha noqotee, qoyaanku wuxuu noqon karaa inta u dhaxeysa 50 ilaa 80%, taas oo ah mid dhexdhexaad ah.
Mid ka mid ah siyaabaha ay ugu jecelyihiin dadka guryaha leh waxay xajinayaan sonkorta dhalada.
Diyaarinta jiilaalka ee toonta bangiyada waxay qaadataa dhowr marxaladood:
Madaxa ilkaha ku nadiifi.
Ku qallaji heerkulka qolka illaa 5 maalmood.
Ku rid xabadaha toonta dhalada.
Ha daboolin daboolka, ku rid meel qalalan.
Waxaan ku kaydi karaa toonta qaboojiyaha? Qaboojiyaha - badbaadada arrimaha ku saabsan ammaanka cuntada. Caadi ahaan, gurigeydu waxay haystaan ​​bocorka, broccoli, basbaaska, qajaar-geedka iyo khudaarta kale ee qaboojiyaha.
Si aad u ilaaliso toonta qaboojiyaha aad u baahan tahay:
Madaxa si fiican u qalaji.
Ku rid bacaha warqadda.
Haddii la doonayo, ku dar milix ama diirka basasha.
Ku kaydi qaboojiyaha si gooni gooni ah khudaarta kale.
Foosto basasha waxay sidoo kale si fiican u ilaalin karootada.
Habka lagu keydiyo toonta qaboojiyaha ee fiidiyowga:
Waxay jecel yihiin hoyleeyaal badan. Si aad u dhigto toonta cusbada aad u baahan tahay:
Isku daa qoryo u kaydi: kala sooc, qalalan.
Qaado sanduuqyada laga sameeyay curiyaha.
Ku dar milixda hoose ee sanduuqyada.
Sare u dhig tufaaxa.
Ku dabool cusbo.
Ku rid xariiq kale oo sare.
Safafka noocan oo kale ah waxaa la dhigi karaa ilaa 4-5 hal sanduuq. Garlic milixda waxaa lagu kaydiyaa dhalooyinka.
Waxaa muhiim ah in si wanaagsan loogu shubo meelaha u dhaxeeya madaxyada oo iska hubi in aysan is taaban.
Goobey in Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah
Haddii madaxku bilaabo inuu ka sii daro si uu u badbaadiyo dalagyada oo dhan, isticmaal habka kaydinta. Arrintan awgeed:
Waxay doortaan ilko wanaagsan, jeexjeexyada afuufaya.
Qashin leh Booqday Furimaha Dagaalka hilibka.
Ku rid bangiyada.
Bangiyada ku dabool daboolka caagga ah.
Doorashadani waxay ku haboontahay keliya marka ay dhacdo waxyeello dalagga, laakiin mid ka mid ah habab badan oo lagu keydiyo. Haddii beergooyska ay aad u hodan tahay, waxaa fiican in la keydiyo qaar ka mid ah toonta. Sidoo kale, tiro this toon ah ayaa loo isticmaali karaa ilaalinta degdega ah ee alaabooyinka qaar ka boodaya, tusaale ahaan at aqalka.
Faa'iido la'aanta qaabkani waa nolol shelf oo gaabanlaakiin faa'iido waa in ay jirto had iyo jeer hadiyado toon ah.
In foomka daahirsan
Toonta jilicsan waa in lagu keydiyo oo keliya qaboojiyaha. Sidan oo kale, xaaladdeeda dabiiciga ah kama dhicin muddo dheer. Si loo kordhiyo nolosha shelf ee toonta sida waxaa la gelin karaa weel weel ku shub.
Beddelka waa in lagu keydiyo toonta diirran ee weel leh. Si arrintan loo sameeyo, waa nadiif, qoyan toon qallalan oo lagu duubay weel dhoobo ah, oo xir dabool caag ah kuna rid qaboojiyaha.
Faa'iidada qaabkani waa in marka lagu daro ilaalinta toonta, soo saarku waa saliid leh ari cajiib ah.
Habka waa mid sahlan:
Peel toon ah toon.
Ku daadi yar yar ee kusaddii dhadhanka: saytuunka, gabbaldayaha, iwm.
Iska xaji kari si cad oo ku jirta weel yar oo subag.
Xidh daboolka, ku rid qaboojiyaha.
Habkan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inuu ku keydiyo basasha cagaaran.
Bacaha wax lagu duubo
Qaado bacaha rooga ah ee aad adigu kaaga dhajin karto haraadiga dharka aan la rabin. Ku xir bacaha si xoog leh oo xoog leh salineed. Ka dib markaa, qalalan. In bacaha "cusbada" ee toonta. Saltku wuxuu ku dhuftey dharka, sababtoo ah taasi waxay abuureysaa caqabad ku saabsan bakteeriyada cudurada. Garlic ayaa socon doona muddo dheer.
Sidaa daraadeed, waxaad kaydsan kartaa khudaarta qalalan, sida broccoli ama kaabajka kiilada, bacaha wax lagu duubo.
Habkani waa mid aan caadi ahayn, laakiin waxtar leh. Madaxda toonta ah ee la dhalaaliyay ee la isku qurxiyo. Waxa uu daboolaa iyaga oo qaboojiya. Sararka ku jira qolofka paraffin waxaa lagu kaydiyaa illaa lix bilood. Qaabka isku midka ah ee loo adeegsado waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo nalalka gladiolus.
Garlic waxaa la geliyaa dhalooyinka saddex litir leh oo madax ah oo ku yaal jagada ay ku koraan beerta. Shub kasta oo bur ah oo bur ah. Bangiyada noocaan ah waxaa lagu hayaa meel qabow: qaboojiyaha ama balakoonka.
Meeshii cusbo iyo bur, tufaaxa waxaa lagu shubay balka cusbada, waa ka fiicnaan haddii ay tahay dhadhanka qoryaha waaweyn. Isla mar ahaantaana, toonta waxaa la dhigaa sanduuqyada xayawaanka ama sanduuqyada oo lagu kaydiyaa meel qalalan oo qabow. By habka, gurigeyaal badan oo si guul leh ku kaydiyaan karootada ee sida balka.
Sidee loo ilaaliyaa toonta guriga ilaa guga? 12 siyaabood oo lagu kaydin karo toonta fiidiyowga:
Toonta la marsiiyay waxaa lagu kaydiyaa wax ka badan 2 bilood.
In lagu daro bur, cusbo, sida balka, paraffin, bacaha dharka, oo ku xiran heerkulka iyo qoyaanka - ilaa 5 bilood.
Saliid - ugu badnaan 3 bilood.
Qaboojiyaha ku jira boorsooyinka warqadda - qiyaastii 3 bilood.
Baananka, xayawaanka aan nadiifka ahayn ayaa lagu kaydiyaa ilaa 3 bilood.
Toonta jiilaalka ayaa loo kaydiyaa si ka sii daran, sidaas darteed waxay isku dayaan inay si dhakhso ah u isticmaalaan. Toonta xilliga guga - waxay ku fiican tahay kaydinta muddada dheer. Waxay qabataa kuleyl iyo qabow labadaba.
Haddii doorashada xayirista toonta guriga ay ku dhacdey in ay udagsameyso gumeysi, kaliya waa la isticmaali karaa. Waxay ku habboon tahay dhammaan habab kasta, oo ay ku jiraan in lagu xiro shaashadda heerkulka qolka.
Ma tahay basasha iyo toonta loo oggol yahay in lagu keydiyo xilliga jiilaalka? Meelo ku kaydi basasha iyo toon waxay noqon kartaa wadajir.
Weelka ugu fiican ee tan loogu talagalay waa sanduuqyada jilibka. oo leh godadka hawada.
Waxaa ugu wanaagsan in la geliyo basasha, toonta sanduuqyadaas oo ku dhaji balakoonka kuleylka leh.
Intaa waxaa dheer, bacaha basasha lagu qooyay cusbo, waxaad ku kaydin kartaa basasha iyo toonta. Sanduuqyada kartoonada ayaa sidoo kale ku haboon ujeedooyinkaas.. Ku rid meel qabow.
Sidaa darteed, toonta waxaa si fiican loogu hayaa guriga. Waxyaabaha kala duwan ee hababka kala duwan ee marti-geliyadu waxay u heli doonaan kuwa ugu fiican. Garlic ayaa diyaar u ah in lagu jiifiyo jiilaalka oo dhan xaaladaha kala duwan ee in goosashada weyn aad u dabbaqi kartaa dhowr hab oo mar mar. Iyadoo la raacayo shuruudaha oo dhan, toonta waxay joogi doontaa guriga weligiis.